I-WiFi & Ikhofi YAMAHHALA - Eduze Konke - I-Airbnb
I-WiFi & Ikhofi YAMAHHALA - Eduze Konke
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lodgeful
U-Lodgeful Ungumbungazi ovelele
Lena indawo ka-Iberia. Itholakala ngqo kuthelawayeka futhi iseduze nayo yonke into!
Imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka e-Avery Island esingethe ukuvakasha kwemboni yaseTabasco kanye neJungle Gardens. Nethezeka ekujikeni ngaphandle ngenkathi ubukele ukushona kwelanga noma usebenzisa i-WiFi yamahhala ukusakaza i-Netflix. Kukhona nekhishi elihlome ngokuphelele, eliphelele nomakhi wekhofi, namathani amabhodwe namapani.
Uqinisekile ukuthi uzothola umoya wokungenisa izihambi nobuhle obuhle kakhulu ngenkathi uhlala lapha!
Indawo engenakunqotshwa futhi ihlanganisa nelondolo yasendaweni.
Nginemithetho emithathu nje elula: Akukho Ukubhema ngaphakathi. Azikho Izilwane Ezifuywayo. Futhi sicela uhloniphe ukuthi ukuphuma kungo-11 AM, ukuze sikwazi ukucabangela isivakashi esilandelayo esifikayo.
4.88 · 97 okushiwo abanye
Le ndlu ethokomele iyimizuzu eyi-14 kuphela ukusuka efektri edumile yaseTabasco nase-Avery Island. Futhi kungaphansi kwamaminithi angu-5 ukusuka ezitolo ezinkulu zakudala, izindawo zezemidlalo, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye nezitolo. Bheka incwadi yethu ye-PDF ukuze uthole lonke ulwazi. Siyakwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya.
Izivakashi zizokwazi ukufinyelela ngokugcwele futhi zisebenzise iyunithi amahora angu-24 ngosuku. Ungeza uphinde uhambe ngendlela othanda ngayo futhi kunokhiye we-elekthronikhi, ngakho-ke abekho okhiye okufanele uhambisane nabo! Kungenzeka ukuthi ngeke ungibone ngesikhathi sokuhlala kwakho, okukuvumela ukuba ube nobumfihlo obengeziwe kanye nokunethezeka. Nokho, ngilapha noma nini lapho udinga ukufinyelela khona. Uma udinga okuthile noma unemibuzo, vele ungithumelele umlayezo nge-Airbnb futhi ngizoshesha ukuphendula.
Izivakashi zizokwazi ukufinyelela ngokugcwele futhi zisebenzise iyunithi amahora angu-24 ngosuku. Ungeza uphinde uhambe ngendlela othanda ngayo futhi kunokhiye we-elekthronikhi, ng…
ULodgeful Ungumbungazi ovelele